zvigadzirwa | Shijiazhuang Neming Kunze & Export Co, Ltd.
Nhabvu Yekudzidzisa Sutu
Nhabvu Chikwata Pfeka
Soccer Jersey neShort
Kumhanya Kwevanhu T Shirts
Sleeveless Kumhanya Tops
Yedu mitambo yekupfeka yakagadzirirwa kupa yepamberi uye yakasununguka kupfeka kune vatambi uye vanofarira zvemitambo. Izvo zvinogadzirwa kubva kumusoro kuita uye kusimba zvinhu.
Kune yakakura jira renji, senge donje, donje / poly / spandex musanganiswa, polyester, viscose, nylon nezvimwe Sechikumbiro chakasiyana, jira rinorapwa nemabasa akasiyana, senge wicking uye nekukurumidza kuoma, anti-UV, anti-static , anti-hwema etc.
Tarisira jira rinoshanda, kune zvakare kwakarukwa kwakasiyana siyana, silika anodhinda, kudhinda kwedhijitari, silicon kudhinda, embossing, kupisa kutamisa kudhinda kuti iwe nekirabhu yako musiyane.
Mapfekero edu emitambo anosanganisira: Jersey, Tee Shirts, Polo Shirt, Tops & Shorts, Pants, Training Suit, Joggers, Bibs nezvimwe zvakagadzirwa zvakakwana.
Isu tinopa akasiyana siyana ezororo rekupfeka paT hembe, Polo mahembe, masweatshirt, hoodies nezvimwewo Uchawana wakasununguka & wakasununguka kupfeka ruzivo panguva dzako dzisingashande.
Zvisinei nekugara nemhuri yako kana chero zviitiko zvekunze, unogona kuwana zvipfeko zvakakodzera kubva kwatiri. Yedu bespoke sevhisi inosanganisira masitayera, zviyero, zvemukati zvemachira & mavara, logo nezvimwe chero zvaunoda, isu tichakuitira. Tichakupa mbatya dzakakosheswa dzichiita kuti uve wakasarudzika.
Hatisi kungogadzira zvipfeko, isu tiri kukuchengeta iwe zvakawanda…
Isu tinopa hombe sarudzo dzekupfeka dzebasa, senge T shirts, polo Shirts, yunifomu, chengetedzo Mabhachi. Iyo inogadzirwa kubva kune inogara yakasimba, inofema & yakakosha machira ekupa iyo yezuva rese kuchengetedza mukati memabasa ako. Zvipfeko zvedu zvebasa zvakagadzirwa zvine hungwaru kune ese mashandiro ezvinhu, sehwaro hwedenga, wepakati kana wejaketi rekunze.
Yedu yekunze kupfeka kunoitwa kubva kune yakanakisa inoshanda uye yakasununguka zvinhu. Ichakuitira iwe unodzivirirwa uye kunakirwa pane ako ekunze zviitiko mune chero mamiriro ekunze mamiriro.
Iyo inouya mukupfeka kweski, kunaya kwemvura, zviputi zvemhepo, Mabhachi emvere, softshell majaketi, padded bhachi. Ivo sarudzo dzakanaka dzekukwira mangwanani, hove, kuvhima, kutsvedza, kusasununguka, kudzika musasa, kukwira kukwira nezvimwe.